I-Svedjan, indlu yesi-2 kwindlu enombono eHällesjö - I-Airbnb
I-Svedjan, indlu yesi-2 kwindlu enombono eHällesjö
Hällesjö, Jämtlands län, Sweden
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAdim
Indlu ethandekayo enemigangatho enesisa kunye namagumbi aqaqambileyo embindini wendalo yaseJämtland. Apha unethuba lokufumana ubomi bokwenyani bangaphandle, kunye nokufikelela kwizikhephe, ukuloba kunye nokuhamba intaba ehlotyeni nakwiimoto zekhephu, ukuloba ebusika kunye nokutyibiliza ebusika.
Ibekwe kwindawo ephezulu kwaye ineembono ezintle, unokufikelela kwelinye lamagumbi amabini ahlukeneyo anekhitshi lawo elixhotyiswe ngokupheleleyo.
Sinokukunceda ukuba ubhukishe isikhokelo sokuloba, ukuzingela, inja sledding kunye ne-snowmobile safari kuxhomekeke kwixesha lonyaka.
Indlu inamagumbi amabini kwimigangatho eyahlukeneyo. Indlu nganye inekhitshi layo kwaye yabelana ngegumbi lokuhlambela elisezantsi, kunye nendlu yangasese eyongezelelweyo ephezulu. Kulabo abathanda ukupheka, sincoma umgangatho ophantsi, onesitofu esikhulu segesi se-90cm kunye nezixhobo ezipheleleyo zekhitshi.
Onke amagumbi okulala aneengcango, kodwa ngaphandle kokutshixa.
Umbuki zindwendwe ngu- Adim
Ngentsebenziswano nabamelwane bethu abamangalisayo kule lali, sinokukunceda ngesikhokelo sokuloba kuzo zombini iintlanzi zokuloba echibini kunye namanzi aqukuqelayo e-trout, i-char kunye ne-grayling, kunye nokuloba emhlabeni okanye kwisikhephe se-perch kunye ne-pike enkulu. Ebusika, ukuloba komkhenkce kuyamangalisa, ngoko kutheni ungahlanganisi kunye nohambo olumangalisayo kwi-scooter kunye nesidlo sasemini elangeni lasebusika?
Ebusika, ngamanye amaxesha sinethuba lokucwangcisa izilayidi zeenja kunye ne-sleds, amava afanelekileyo anokudibaniswa nathi silungiselele isidlo esimangalisayo kuwe kwindalo.
Ngentsebenziswano nabamelwane bethu abamangalisayo kule lali, sinokukunceda ngesikhokelo sokuloba kuzo zombini iintlanzi zokuloba echibini kunye namanzi aqukuqelayo e-trout, i-char…